निजी विद्यालयको ब्रम्हलुट : अभिभावकसँग मनोमानी शुल्क, मारमा शिक्षक ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
निजी विद्यालयको ब्रम्हलुट : अभिभावकसँग मनोमानी शुल्क, मारमा शिक्षक !
दसैं नजिकँदै छ । रोजगारको सिलसिलामा राजधानी पसेकाहरु गाउँघरतिर फर्कने चपेटा र तयारीमा छन् । यात्रु टिकट काउन्टरमा लाइनमा बस्न थालिसके तर राजाधानीका निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षक भने निरास छन् ।
लामो समयदेखि कोरोना सङ्क्रमणका कारण थलिएको हरेक क्षेत्र त्यसमा पनि विद्यालय विशेष मारमा परे । विभिन्न कारण र बहाना देखाएर निजी विद्यालयहरुले अभिभावकसँग पुरानै कारोबार गरे तर शिक्षकलाई भने अभिभावकबाटै पैसा नउठेकाले पूरै तलब दिन नसक्ने भनाइ राख्न थालेका छन् ।
काठमाडौं पुरानोबानेश्वरस्थित एक विद्यालयमा पढाउने आफ्नो नाम नबताउने शर्तमा हाम्रो सन्देश डटकमलाई एक शिक्षक भन्छन्,“पहिला अनलाइन पढाउँदा पनि बहाना गरेर कुल तलबको पच्च्सि प्रतिशत मात्र पाइयो अहिले भौतिक कक्षा चलेर परीक्षा सञ्चालन भइ अभिभावकबाट पुरै मासिक शुल्क उठाए पनि शिक्षकले न त समयमै पाएका छन् नत पुरै पाउँछन् ।” शिक्षक पेसा सम्मानित भए पनि निजी स्कुलमा भने मजदुर बराबर पनि पारिश्रमिक नपाएको उनको गुनासो छ । आजभोलि निजी विद्यालय शिक्षाका लागि भन्दा पनि व्यापारका लागि लागिपरेको उनले गुनासो पोखे ।
दसैंमा घर जानुहुन्न भन्ने प्रश्नमा उनले भने,“जानुपर्ने तर खै पैसा ? कसरी मनाउने दसैं ? घरमा सबै आसमा होलान् तर मसँग टिकट काट्ने पैसा समेत छैन ।” यो त प्रतिनिधि आवाज मात्र हो । शिक्षक र अभिभावकको ढाडमा टेकेर मस्तीको यात्रा गर्ने निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले शिक्षकका समस्या कहिले बुझ्ने ?